Barcelona oo dhegaysanaya dalabyada u imaanaya Philippe Coutinho & Kooxda Real Madrid oo u sabab ah! – Gool FM
(Barcelona) 09 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay dhagaysan doonto dalabyada u imaanaya ciyaryahankeeda Philippe Coutinho waxayna diyaar u tahay inay lumiso.
Real Madrid ayaa sabab u ah in Barcelona ay dhegaysato dalabyada u imaanaya xiddiga reer Brazil maxaa yeelay Philippe Coutinho waxa uu sameeyey bandhig aad u liita kulankii ugu dambeeyey ee El Clasico oo kooxdiisa Barca ay wajahday Los Blancos.
Kubbad abuuraha reer Brazil ayaa si weyn loola xiriirinayaa inuu isaga dhaqaaqi doono garoonka Camp Nou kaddib markii uu 142 milyan oo gini uga soo tagay naadiga Liverpool 13 bilood ka hor.
26-sano jirkaan ayaa bandhig aad u hooseeya sameeyey kulankii ay Barcelona barbaro 2-2 la gashay Valencia iyo weliba ciyaartii ugu dambeysay ee ay barbaro 1-1 la galeen kooxda ay coltamaan ee Real Madrid.
Coutinho ayaa kaliya dhaliyey afar gool 20 kulan oo uu ciyaaray horyaalka La Ligaha Spain xilli ciyaareedkan Jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain ayaana soo jeedinaysa in madaxda kooxda Barca ay diyaar u yihiin inay dhegaystaan dalabyada u imaanaya Coutinho suuqa xagaaga.
Ciyaaryahankii hore khadka dhexe ee kooxda Liverpool ayaa si weyn loola xiriirinayaa inuu dib ugu soo laaban doono horyaalka Premier League kaddib 13 bilood oo dhib badan oo uu ku qaatay Barcelona kaddib markii uu lacag badan ku aaday garoonka Camp Nou.
Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa labaduba doonaya inay u dhaqaaqaan oo ay ku tartamaan saxiixa ciyaaryahankii hore ee Liverpool, laakiin kooxda Catalan ayaa dalban doonta lacag badan haddii ay luminayso Coutinho.
Liverpool oo dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka ka dib guul raaxo leh oo ay ka gaareen Bournemouth....+SAWIRRO